Nuxurka Aqoon is-weydaarsi ku saabsan doorka Warbaahinta ee horumarinta Cadaaladda | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Nuxurka Aqoon is-weydaarsi ku saabsan doorka Warbaahinta ee horumarinta Cadaaladda
Nuxurka Aqoon is-weydaarsi ku saabsan doorka Warbaahinta ee horumarinta Cadaaladda
Posted by: radio himilo April 2, 2017
Muqdisho – Aqoon is-weydaarsi ku saabsan doorka warbaahinta ee ku aadan horumarinta cadaaladda oo ay soo qaban-qaabisay xarunta kaalmo-sharciyeedka Jaamacadda Muqdisho ayaa lagu qabtay kulliyadda sharciga iyo qaanuunka.
Xubno isugu jira suxufiyiin ka kala socday qeybaha warfaafinta gudaha iyo ardayda barata kulliyada shareecada iyo qaanuunka ee Jaamacadda ayaa ahaa bartilmaanta ugu weyn ee aqoon is-weydaarsiga loo qabtay.
Mowduucyada la xiriira kaalinta saxaafadda ee ku aadan cadaaladda iyo sida garsoorku ula fal-galo la dhaqanka baahinta la xiriirta go’aannada iyo kiisaska ay guddoomaan waa mid kamid ah mowduucyada ugu weynaa ee lagu soo qaaday madasha.
Su’aalo badi u muuqday inaysan muddaba helin jawaabo cilmiyeysan kuna aadan labada dhinac ayaa la isla soo qaaday. Sida ay kasoo qeyb-galayaashu kaga war-celinayeen weydiimihii furnaa iyo galinta doodo marmar u muuqday inay u baahnaayeen madashan oo kale in la isugu sheego ayaa si fiican loo qayaxay.
Mid kamid ah weydiimihii ku jiray aqoon is-weydaarsiga ayaa aheyd tilmaamista dhibaatooyinka ka dhex-jiri kara cadaaladda iyo warbaahinta. Jawaabaha laga bixiyayna haba u muuqdeen tira badnaan, hayeeshe waxay gudbinayeen farriimo iska daba dhow.
Halka qofna uusan eedda saarin labada dhinac, hadana waxa ugu weyn ee la xusay ayaa aheyd inaysan jirin xiriir dhumuc leh oo labada dhinac ka dhaxeeya taas oo daaqadda u furtay kala qaadashada fikrado taban iyo dhaliilo aan wax dhiseyn.
Tusaale ahaan, sida ay tilmaameen dhinac kamid ah dhinacyadii loo qeybiyay xubnihii kasoo qeyb-galay aqoon is-weydaarsiga, maqalka kiisas aan yeelan dhamaad lagu farxo iyo is-jiitanka marmar laga soo sheegto guddoonka garsoorka u qaabilsan cadaaladda – taas oo aan helin fal-celin la isla qaadaa-dhigay – ayaa liifadda u gaabisay isku soo dhawaanshiyaha ka dhex jiri kara garsoorka iyo warbaahinta.
Balse qeyb kale ayaa soo jeedisay in halka la iska qaadan la’yahay ay tahay maamulka jira ee ay labada dhinacba hoos tagaan. Haddii dowladdu damaanad qaadi laheyd xurriyadda hadalka iyo nabad-galyada suxufiga – iyada oo la xoojinayo aqoonta iyo heerka nololeed garsoorayaasha iyo maxkamadaha, waxay tilmaameen inaysan dhici laheyn tuhunka ka dhex taagan labad dhinac.
Helidda hadaba xalka dhibaatooyinka la tilmaamay inay ka dhex jiraan garsoorka iyo warbaahinta si ay u horumariso cadaaladda ayaa iyadna qaadatay gorfeyn adag.
Waxaase aragtidan danbe xoojin looga dhigay heerka musuqmuusuqa uu kaga jiro laamaha dowladda taas oo laf ahaanteeda u baahan xalin gaar ah. Doorka ku takri-falista sharcigana waxay qeyb ahaan u noqotay adeegsiga jeebka buuxa ee uu sito mid kasta oo raba inuu xaq aan kiisa aheyn ku hantiyo awoodda sharciga.
Hayeeshe, iyada oo qeyb ahaan laga shidaal-qaadanayo awoodda labada dhinac ayaa la is arkay muhiimadda ay leedahay inay sameystaan guddi kala matalaya kaas oo dhibaatooyinka soo muuqda ku xaliya qodobada ku dhigan dastuurka dalka iyo xeer-hoosaadka u degsan qawaaniinta dhinacyada.
Ku tiirsanaanta hal guddi oo wada matala kaas oo kiisaska iyo arrimaha kawada dhexeeya ku qaabila qaab is-afgarad sharciyeysan ah waxay jawaab u noqon kartaa in la helo iskaashiga iyo midnimada labada dhinac, marka loo eego aqlabiyadda ra’yi ururinta la sameeyey.
Inaan lasameynin muraayad ka wada dhaxeysa dhinacyada waxay iyadana xoojinaysaa, sida ay tilmaameen, baahidda iyo kororka heerka kala dheeraansho ee garsoorka iyo warbaahinta. Taas oo cirka kusii shareereysa rajada lagu horumarin karo cadaaladda.
Natiijada kasoo muuqatay aqoon is-weydaarsiga oo diraysay farriin bilow u ah geeddi loo galo sare u qaadista heerka tayada cadaaladda awgeed, ayuu Abuukaate Abdihakim Shariif Ibraahim oo qareen u ah xarunta kaalmo-sharciyeedka – sidoo kalana ahaa lakabka ugu sarreeya ee socodsiinayay kulanka, wuxuu xusay sida ay kaga go’an tahay inay ka shaqeeyaan mowduucyada cadaaladda iyo bulshada ka dhaxeeya. Taasina ay u mari doonaan waddooyin kasta oo suura-gal ka dhigi kara horumarinteeda.
Next: Neymar oo dhaliyay goolkiisii boqolaad – 100